Sawirro: Calamada Somalia & Turkey oo ka babanaya Wadada Maka Almukarrama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Calamada Somalia & Turkey oo ka babanaya Wadada Maka Almukarrama
A warsame 22 January 2015 22 January 2015
Mareeg.com: Iyadoo berri Muqdisho laga sugayo madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyib Erdogan ayaa waxaa jidka Maka Almukarrama la suray calamada Soomaaliya iyo Turkiga.
Baallayaasha ku dhiririsan Wadada Maka Almukarrama ayaa waxaa saaka ka babanaya calamada labada dal, iyadoo Muqdisho berri soo dhaweyneyso madaxweyne qeyb weyn ka qaatay bilic soo celinbteeda bilaabatay.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la xiray waddooyin badan, ciidamo fara badan ayaana lasoo tubaya goobaha muhiimka ah.
Dhanka kale, waxaa horay magaalada Muqdisho u soo gaaray ciidamo gaar ah oo ka socda dalka Turkiga, kuwaasoo kasoo hormaray madaxweynaha, si gaar ahna ula socon doona amaankiisa.
Amaanka guud ee caasimadda waxaa haatan ku howlan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Daawo sawirrada sida Siilaanyo u booqday magaalada Laascaanood
Faahfaahin: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay hotel ku dhow Villa Somalia oo ay ku joogeen wafdi Turki ah